Adjustments လက်ကိုင်နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာ Duty Rolling နှင်း Pusher - တရုတ် Richina
Adjustments လက်ကိုင်နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာ Duty Rolling နှင်း Pusher
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H660
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 320mm 660
ယေဘုယျအား Length: 1400mm
ကိုင်တွယ်: အချင်း 19mm သံမဏိဦး-ပုံသဏ္ဍာန် Tube လက်ကိုင်
အဆိုပါ Rolling နှင်း Pusher သင့်ရဲ့နောက်ကျောနှင့်ပခုံးပေါ်မှာဆီးနှင်းဖယ်ရှားရေးပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂေါ်ပြား၏ကိုလှိမ့ရွေ့လျားမှုနှင့်ဒီဇိုင်းတူးရွင်းပြားနှင့်အတူကြွလာသောနာကျင်မှုဖယ်ရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူသငျသညျ, ကွေးပစ်နှင့်တွန်းအားပေးထံမှ strain စိုးရိမ်ရန်ရှိသည် don`t ။ ယူအားလုံးသည်ရိုးရှင်းတဲ့ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးနှင့်မဏ္ဍိုင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနှင့်အတူ နှင်း Pusher ခွက်ဒီဇိုင်းနှင့်သတ္တုခြစ်အစွန်း, က pass တခုထဲမှာအလွယ်တကူဆီးနှင်းရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ အကြီးစား Duty Rolling နှင်းရေမှုတ်များ ဓါးအတိုင်းအတာ 26 လက်မအကျယ် 13 လက်မအရပ်ရှည်ရှည်ကလမ်းလျှောက်များအတွက်လျင်မြန်ကျယ်ပြန့်လမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်း, ဒါမှမဟုတ်ပိုမိုလျင်မြန်စွာရိုးရာနှင့်အတူထက်သည့်ကားလမ်းကိုရှင်းလင်းနိုင်အောင် နှင်းရေမှုတ်များ , ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလှုပ်ရှားမှုများပျော်မွေ့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါတယ် အိမ်တွင်းနွေးထွေးမှုခံစား။ အဆိုပါ wheel နှင်း Pusher ချိန်ညှိလက်ကိုင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ setting ကိုရှေးခယျြခွင့်ပြု 47 51 မှလက်မကနေအထိတစ်ဦးစုစုပေါင်းအမြင့်အဘို့သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Plus အား, လက်ကိုင်အပိုနွေးထွေးမှုနဲ့လက်နှစ်သိမ့်အဘို့အရာတေးသံသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါလွယ်ကူသောလှိမ့နှင့်မဏ္ဍိုင်ရွေ့လျားမှု6လက်မအရွယ်မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန် polypropylene ဘီးယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Ridge ဘီးချုပ်ကိုင်ဖို့မြေပြင်ကသူတို့ကို enable နဲ့အလွယ်တကူသင်သည်မိုဃ်းပွင့်ပျောက်ဂေါ်ပြားနေချိန်မှာအလှည့်စေပါ။
၏အင်္ဂါရပ်များ Rolling နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ:
စံပြ Adjustments လက်ကိုင်ရှာဖွေနေ Rolling နှင်း Pusher Manufacturer & supplier ? We haveawide selection at great prices to help you get creative. All the Heavy Duty ဘီးကို နှင်း Pusher are quality guaranteed. We are China Origin Factory of Rolling Snow Shovel. If you have any question, please feel free to contact us.